Google yakaburitsa Kadhibhodhi zviitiko kuti zvive pachena | Linux Vakapindwa muropa
Google yaive imwe yemakambani ekutanga kuisa mari muzvinhu chaizvo, Zvakanaka, makore mashanu apfuura, Google Ini ndinoparura Kadhibhodhi, inova ndiyo imwe kadhibhodhi kuratidza iyo chero munhu anogona kushandisa kuona chaiyo chaiyo (VR) pane smartphone. Kadhibhodhi yakatanga kuunzwa kuva mumwe wekutanga chaiwo kits.
Iye zvino kambani yazivisa kuti chirongwa ichi chinowanikwa munzvimbo yakavhurika. kune chero munhu anoda kuongorora nyaya iyi. Sekureva kweGoogle, panguva dzakakosha dzechirongwa, anopfuura mamirioni gumi nemashanu emayuniti eCardboard akaendeswa, pasirese, asi nekufamba kwenguva iyo nhamba yakaderera.
kunze kwaizvozvo iyo SDK haichisiri kuvandudzwa, chirongwa ichi chichiri kushandiswa mune zvedzidzo uye zvevaraidzo zviitiko, Google yakaziva kufarira kweprojekiti kuri kuenderera, saka zvakagadziriswa kutamisa kusimudzira mumaoko enharaunda nekuvandudza chirongwa pamwe chete.
1 Nezve Kadhibhodhi
2 Google Cardboard ikozvino yakavhurwa sosi
Iyo SDK inosanganisira maraibhurari kuti igadzire chaiyo chaiyo kunyorera kweApple uye iOS, dhizaini yekuburitsa mhedzisiro yekutarisa pamakadhibhodhi makapeti, uye raibhurari inowirirana nengowani furemu paramende kune iyo app uchishandisa QR kodhi.
Iyo SDK inokutendera iwe kuti ugadzire kunyorera kweanenge ari chaiwo mahedhifoni pahwaro hwefoni akangwara, achiumba stereoscopic mufananidzo nekukamura skrini kuita maviri mahafu, umo mufananidzo unoumbirwa kurudyi uye kuruboshwe ziso zvakasiyana.
Paunenge uchigadzira zvinobuda, ma parameter senge mhando yemalensi anobatanidzwa, iyo nhanho kubva pachiratidziro kusvika kune lens inotorwa uye nhambwe iri pakati pevadzidzi. Iyo SDK inosanganisira akagadzirira-akagadzirwa maficha ekugadzira chaiwo mamiriro, anosanganisira ekufamba ekuteedzera maturusi, mushandisi interface zvinhu, uye stereoscopic kupa nerutsigiro rwe lens kukanganisa kukanganisa.
Mufananidzo unoshanduka zvinoenderana nenzvimbo yemusoro uye kufamba kwemushandisi, izvo zvinongobvumidza kwete chete kuratidza iyo inomira sitiriyo mufananidzo, semuenzaniso, kutarisa mafirimu e3D, asi zvakare kufamba munzvimbo inowoneka nzvimbo senge mune akasarudzika chaiwo mahedhifoni. (tamba mitambo ye3D uye uone mavhidhiyo nemifananidzo mu360 degree mode).
Kuongorora kusuduruka muchadenga, kamera, gyroscope, accelerometer uye magnetometer zviripo mumafoni efoni zvinoshandiswa. Ruzivo rweprojekti urwu inogona kunge ichishandiswa nevamwe vehunyanzvi hwehunyanzvi.
Google Cardboard ikozvino yakavhurwa sosi
Vanofarira vanofarira vakave nemukana wekukudziridza zvakasununguka mashandiro Kadhibhodhi uye wedzera rutsigiro rwezvirongwa zvitsva yemafoni emidziyo skrini. Panguva imwecheteyo, Google inotarisira kuenderera mberi nekutora chikamu mukuvandudza kwese uye kuendesa maficha nyowani kuchirongwa, senge zvinhu zvekutsigira iyo Unity mutambo injini.
Nechivhurwa sosi uye kuwana kune rwese ruzivo rwunodiwa kuti ugadzire zvisingaite zviitiko, nharaunda inogona kuenderera nekukudziridza chaiyo chaiyo yekushandisa.
Iyo yakavhurwa sosi purojekiti inosanganisira maraibhurari evakagadziri ku Gadzira makadhibhokisi ako maapplication eIOS uye Android uye upe chaiwo echokwadi zviitiko pamakadhibhodhi ekuratidzira.
Inopawo API yekutevera musoro, lens kumonyanisa kupa, kuisa kwekubata, uye Android QR kodhi raibhurari, saka maapps anogona kuenderana chero kadhibhodhi kuratidza pasina kuvimba neKadhibhodi app.
Iyo yakavhurika sosi modhi inobvumidza nharaunda kuti ienderere mberi nekuvandudza Kadhibhodhi uye nekuwedzera kugona kwayo, semuenzaniso kuwedzera rutsigiro rwekugadziridzwa kwesystem nyowani pamafoni efoni uye makadhibhokisi ekuratidzira sezvavanowanikwa. Google icharamba ichipa muprojekti nekuburitsa maficha manyowani, kusanganisira Unity SDK package.
Kubudirira mukati meKadhibhodhi sdk kunoda Android Studio 3.4.1 uye Android NDK yekuvandudza pane Google's mobile operating system. Kune iOS, vagadziri vanoda Xcode 10.3 kana yakakwira.
Iyo Google VR SDK yekuvandudza chaiwo chaiwo mapurogiramu uye demo nhare mbozha maapp Kadhibhodhi rakavhurika pasi peApache 2.0 rezinesi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Google yakaburitsa zviitiko zveKadhibhodi kuti ive open source
Iyo chaiyo nharaunda inodiwa kune linux yaisazove yakaipa zano gnome mu vr Ndinovimba imwe nguva imwe hmd ye pc ine ubuntu.